musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » NASA nzira yekurwa neDutu Gobally
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
NASA yakabatana neYunivhesiti yeMichigan kurwisa Madutu.
Iyo projekiti inonzi CYGNSS rave riri basa rekupayona.
US Space Agency NASA yakapa kondirakiti kuYunivhesiti yeMichigan yeCyclone Global Navigation Satellite System (CYGNSS) yekuita mamishinari nekuvhara.
Iine boka renyeredzi rema microsatellites masere, iyo sisitimu inokwanisa kuona dutu kazhinji uye nenzira nzira masataneti echinyakare asingakwanise, achiwedzera kugona kwemasayendisiti kunzwisisa uye kufanotaura dutu.
Iko kukosha kwese kwechibvumirano kungangoita $ 39 mamirioni. ICYGNSS Science Operations Center iri kuYunivhesiti yeMichigan.
Kwemakumi emakore, NASA yakaita chinzvimbo chinotungamira pakushandisa maPasi-anoona satellites kuunganidza iyo data inodiwa kupa huwandu hwehuwandu hwemamiriro ekunze ekufanotaura. CYGNSS inoenderera mberi nebasa iro, ichishandisa nzira yekutarisa iri kure inonzi "GPS chiratidzo chinopararira" kuti uone kuburikidza nemvura inorema yekufungidzira simba remhepo pamusoro pemakungwa emukati memupupuri.
"CYGNSS rave basa rekupayona iro rakatipa nzwisiso nyowani mukuchinja kwekukurumidza kuwedzera madutu ekunze," akadaro Karen St. Germain, director weNASA's Earth Science Division. "CYGNSS zvakare chishandiso chine simba chekuona mafashama pasi uye mumakungwa microplastic marara ekuona - ndiwo mhando yekuwedzera kukosha isu tinoda kuona, uye kuri kuvhurira nzira yesainzi yakawanda iyo inozobatsira zvakakosha munharaunda."
Izvo zviyero kubva kuCYGNSS zvinobatsira pakutsvagisa mukuvandudza kwealgorithm, kuongorora kubatsira neramangwana modelling kuedza, uye Earth system process zvidzidzo.
Kumwe kuita kuchagonesa kutsva kutsva kutaridzika kwemamiriro ekunze enguva refu uye kuwedzera saizi yezviitiko zvakanyanya zvinogona kubatsira nekumodera uye kufungidzira. CYGNSS satellites inoenderera ichitora 24/7 kuyerwa kwemhepo pamusoro pemhepo, zvese pasirese uye munzvimbo dzinopisa dzedutu, dzinogona kushandiswa kudzidza mamiriro emamiriro ekunze uye kugadzirisa huwandu hwekufungidzira kwemamiriro ekunze. Panyika, masatellite anotora zviyero zvinoramba zvichiitika zvemafashama emvura uye hunyoro hwevhu izvo zvinoshandiswa mu hydrological process zvidzidzo uye yekutarisa njodzi.